Window genuine ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းအတွက် Window7loader 2.1.9 ~ mgkhainghtoo
Window genuine ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းအတွက် Window7loader 2.1.9
12:52 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ဒီပြဿနာဟာ အခုတလော အရမ်းအဖြစ်များပါတယ် ။၀င်းဒိုး Genuine ဖြစ်ပီဆိုရင်
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လက္ခဏာလေးတွေကိုတော့ ဖြစ်ဖူးသမျှလူတွေ သိပီးဖြစ်လိမ့်မယ်
နောက်ခံပုံပြောင်းမရတော့တာ ရက်၃၀ ပဲခံတော့မယ် ။ စကရင် အောက်ခြေမှာလဲ
This copy window genuine ဆိုတာပေါ်တယ် ။ လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲတွေအများကြီးမှာ
အခုတင်ပေးတာက Loader ပါ ။ Remover ဆိုတာက ပိုပီးကောင်းတယ် ။ ရှာမရပဲ
ဖြစ်နေလို့ အရင်တင်ထားတဲ့လင့်ကလည်း အကောင့်ပျက်သွားလို့ ရှာမရတော့ပါဘူး
တွေ့ ရင်ပြန်တင်ပေးပါမယ် ။ အခုတင်တဲ့ဆော့ဝဲက အဆင်ပြေတဲ့သူ ပြေနေပြီးပီမို့ 
တင်ပေးလိုက်တာပါ Loader က အနည်းငယ်အန္တရာယ်များပါတယ် အဆင်မပြေရင်
၀င်းဒိုးပြန်မတက်လာတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆော့ဝဲနဲ့ အတူ ပြုလုပ်နည်းဖိုင်ပါပါတယ်
သေချာဖတ်ပါ သေချာလိုက်နာပါ ။ မျက်စိမှိတ်လုပ်ချင်ရင်တော့ ဆော့ဝဲကိုယူလိုက်
ပီးရင် Antivirus ကို ပိတ်ထားပေးပါ ။ ပီးရင် Run လိုက်ပါ Install နဲ့ Uninstallလို့ 
ရေးထားပါတယ်။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး ။ Install ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ ပီးရင်တော့
Restart ပြန်ချရပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့လိုဆို အဆင်ပြေပါပြီ။ ဒီဆော့ဝဲကြောင့် အဆင်ပြေ
အောင်မြင်သွားတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ် ။ အဲ့ကြောင့် ၇၅% စိတ်ချလက်ချနဲ့ 
သုံးလိုက်ပါ ။ အထဲမှာလည်း တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းပါနေတာမလို့ 
သေသေချာချာဖတ်ပီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ Loader တွေက Window ပြန်မတက်
မလာတော့တာ ဖြစ်တတ်တယ် ဖြစ်ဖူးတယ်မလို့ ပြောတာ ဘာမှမလုပ်ပဲထားမှာနဲ့ 
တစ်ခုခုလုပ်တော့ တစ်ခုခုဖြစ်လာမှပဲ ။ အဲ့ကြောင့် စဉ်းစဉ်းစားစားလေး လုပ်ပေါ့
မဟုတ်လို့ တက်မလာရင် ကျနော့ကြောင့်ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ဖြစ်တတ်တာလေးကို
ကြိုတင်အသိပေးထားတာပါ ။ ဒီဆော့ဝဲကို လက်တွေ သုံးဖို့ က ဖြစ်တဲ့စက်အနီးနား
မပေါ်လာသေးလို့ ပါ ။ ဒါပေမယ့် ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့စက်မှာ အဆင်ပြေသွားပြီးပီ
ထောက်ခံချက်စာလေးပါ ပြလိုက်တယ်နော် ။ ဘာလို့ အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုရင် Update
ကြောင့်ပါ ။ အဲ့ကြောင့် အင်တာနက်သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျုတာမှာ Window Update ကို
ပိတ်ထားစေချင်ပါတယ် ။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို ရေးပြထားခဲ့ဖူးတာမလို့ ဒီမှာ
အသေးစိတ်ရေးမပြတော့ပါဘူး ပိတ်သာပိတ်ထားလိုက်ပါ နားအေးပါးအေးဖြစ်တယ်
ကဲ ပြဿနာတက်နေသူတွေ ရက်၃၀ မကျော်ခင် ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - www.ziddu.com/window7loader2.19
ဒကာတော်ရေ နေကောင်းကျန်းမာပြီး အိုင်တီနည်းလမ်းများကို များများ
ရှယ်ယာလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း စာရေးလိုက်တယ်ဗျာ. အခု ဦးဇင်း
စက်မှာ Window genuine ဖြစ်နေတယ် desktop backgrown ကလည်း
မှောင်နေတယ်ဗျာ။ နောက်တစ်ခါ ကွန်ပြူတာ ပရောပါတီကို သွားကြည့်တော့လည်း
ရက်က ၂၆ ရက်ပဲ ကျန်တော့တယ် အဲ့ဒါ ဒကာတော်ရဲ့ ဆိုက်ကို ရှာတော့လည်း
ဒေါင်းမရတာနဲ့ စိတ်ညစ်ပီး မေးပို့လိုက်တာဗျာ။ အပန်းမကြီးရင်
အဲ့လိုဖြစ်တာက အင်တာနက်သုံးတဲ့ ကွန်ပျုတာမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဆိုင်ကတင်တုံးက Active ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်လား မသိဘူးနော်
အဲ့လိုဖြစ်တာကိုရှင်းဖို့ဆော့ဝဲလင့် ပို့ လိုက်ပါတယ် အထဲမှာ လမ်းညွှန်လည်းပါပါတယ်
လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ ဆော့ဝဲက မေးထဲကနေပို့ မရလို့ ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်ပါဘုရား
အဲ့ဆောဝဲလေး Run ပေးလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘုရား
ဟုတ်လိုက်လေ မောင်ဒကာရေ။ ကောင်းလိုက်တာ ။ ရက်တွေ ပျောက်သွားပီ။
window is activated. product ID ကီးတွေလည်း ပေါ်လာပီ။ အေးလေကွယ် တတ်သူ
လမ်းညွှန်လိုက်တော့လည်း အဆင်ပြေသားကွယ်နော်။ အေးဟေ့ ဒကာတော်ရေ
ဆက်လက်ဆည်းပူး၍ အများအတွက် များများ လမ်းညွှန်နိုင်ပါစေလို့ ...........
အော် အေး မပန်းပန်းရင် Extra Hard Disk ၅၀၀ GB ကို ပါတေရှင်း4ပိုင်း
ပိုင်းထားလို့ကွာ အဲ့ဒါ ဘယ်လို ပြန်ပေါင်းရလည်း
ပေါင်းပုံပေါင်းနည်းလေးပေါ့ ။ မခက်ခဲရင်ပြောပြပါအုံးနော။ စိတ်ချမ်းသာစွာ
.Supported Operating System :